ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): 2009
(၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် .. နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း
၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့မှာ ကျွန်မရဲ့ (၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့နှင့်အတူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁)နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ .. ။ နောက်တပတ်ထဲမှာ စာမေးပွဲနှင့် နောက်ငါးလလောက်ဆိုရင် ပြီးဆုံးတော့မည့် ပညာရေးတစ်ခုအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေခဲ့ရင်း ဒီနှစ် မွေးနေ့မင်္ဂလာအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းမှာ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေအနည်းငယ်နှင့်အတူ ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ် .. ။ နောင်ဘ၀များစွာတိုင် .. သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ချစ်ခင်စွာ ပြန်လည်ဆုံဆည်းချင်သည့် ဆန္ဒများဖြင့် ... ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံ ဆရာတော်ထံ ၀တ္ထုကပ်လှူဒါန်း အမျှပေးဝေ ရေစက်အတူချခဲ့ပါတယ်။ မအားလပ်တာကြောင့် အချိန်မရသော ကျွန်မအတွက် စိတ်ထဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့သော .. နေ့ဆွမ်းကပ်လှူရန်အတွက် အစစအရာရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ချစ်သူခင်ပွန်းကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး ကျေးဇူးတင်မိသလို နေ့ဆွမ်းကပ်ချိန် ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေရင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် .. ။
ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းဆရာတော်က ကျွန်မအတွက် မွေးနေ့မင်္ဂလာဆုတောင်းစာပေးခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အတွက် နောင်ဘ၀များစွာတိုင်အောင် ဆုံဆည်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းကို မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည့်တရားထဲမှ ကောက်နှုတ်ဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရပါသော ဇနီးမောင်နှံများဟာ ဒီဘ၀တစ်ခုတည်းအပြင် နောင်ဘ၀များစွာဆုံဆည်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းတရားကို ကျွန်မတို့ နှစ်သက်စွာ နာကြားရင်း မွေးနေ့နှင့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အစီစဉ်လေးဟာ အောင်မြင်လှပစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် .. ။
မနှစ်က ဒီအချိန်လေးဟာ ရင်ခုန်ကြည်နူးခြင်းများစွာဖြင့် အသက်ဝင်လှပခဲ့သလို ဒီနှစ် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်လေး အေးချမ်းလှပစွာ တည်ရှိနေခဲ့ပုံက စိတ်နှလုံးသားကို ပြုံးပျော်စေခဲ့ပါတယ် .. ။
ဘ၀မှာ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ် ၊ ချစ်ရသူလည်းဖြစ် ၊ မိသားစုဝင်လည်းဖြစ်သော ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်နှင့် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ကြိုးစားတည်ဆောက်သမျှဟာ စာဖွဲ့သီကုံးပြဖို့ .. စကားလုံးတွေ ရှာမတွေ့တာကြောင့် ရင်ထဲခံစားရသမျှနှင့် တူညီသော သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ဖော်ကျူးလိုက်ပါတယ်ရှင် … ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 6:15 PM9comments Links to this post
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ (၂၀-၁၂-၂၀၀၉)
(ပုံများကို အကျယ်ချဲ့ကြည့်ရန် ပုံများပေါ်တွင် click ခေါက်ပေးပါ)
Speakers : Chit Oo Nyo, Nay Win Myint and Jue
Ticket price is S$15.
Purchase your tickets from:
Daw Than Than Nu [Tha Pyay Nu] (6336 7703, 6336 7601)
Ko Zaw Zaw Naing (9850 6046)
Ma Yin Htoo Htoo Naing (9450 2646)
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 6:56 PM4comments Links to this post
Labels: Events, Invitation
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်အလှူပွဲ (Sembawang )
အောက်တိုဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ .. တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ စင်္ကာပူနိုင်ငံဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းမှ ပြုလုပ်ကျင်းပသော ကထိန်အလှူပွဲကို ကျွန်မ သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ် .. ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ .. ကထိန်အလှူပွဲတွေကျင်းပတိုင်း အစားအသောက်ဈေးရောင်းပွဲအများစုကိုသာ တွေ့ကြုံဖူးလေ့ရှိသော ကျွန်မ .. ဒီနှစ် Sembawang မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ကထိန်အလှူပွဲမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အဆို ၊ အကလေးတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ထူးခြားစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ် .. ။
ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းဟာ Sembawang Park အနီးနားမှာ ရှိတာကြောင့် ကထိန်အလှူပွဲကို လွတ်လပ်ကျယ်ပြန့်သော Sembawang Park ထဲမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အဆို ၊ အကများကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသော အစီအစဉ်လေးက တက်ရောက်အားပေးကြသူများအားလုံးကို ပိုမိုစည်ကားစေပါတယ်။ အစီစဉ်တင်ဆက်ကြေငြာပေးသူများကလည်း ရယ်မောဖွယ် ပျက်လုံးလေးတွေကို ပိုင်နိုင်စွာ ဖျော်ဖြေကြတာကြောင့် ကထိန်အလှူပွဲက အသက်ဝင်နေသလို … တဖက်မှာလည်း အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ၊ ကြာဇံဟင်းခါး ၊ အသုပ်စုံ ၊ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ အစရှိသော အစားအသောက်များကို ပေးလှူကျွေးမွေးနေသည့် အစီစဉ်ကလည်း စည်ကားအသက်ဝင်လှပါတယ် .. ။
အလှူဒါနပြုလုပ်ရန်အတွက် မိမိဆန္ဒရှိသလို ပေးလှူနိုင်ကြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကိုယ်တိုင်သွားကပ်ကြရပါတယ်။ သင်္ကန်းပရိက္ခရာတစ်စုံ .. ကျွန်မတို့စုံတွဲ အလှူဒါနပြုခဲ့ရင်း ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်မရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်.. ။ ဒီကထိန်ပွဲကို ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်များအတွက် ကံစမ်းမဲတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖောက်ပေးပြီး မြိုင်ဆိုင်သော တေးဂီတ ၊ အကများဖြင့် တန်ဆောင်တိုင်ကထိန်ပွဲဟာ Sembawang Park မှာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
( Dhamma Garden Buddhist Temple in Sembawang, Singapore )
( Our couple donation to Dhamma Garden Buddhist Temple, 25-Oct-2009 )
အလှူဒါန စေတနာထက်သန်သူများအတွက် ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်းကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းကြရန် စင်္ကာပူရှိ ရွှေမြန်မာများကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ရှင် .. ။
Dhamma Garden Buddhist Temple
No.2, Jalan Kerayong, Singapore 759300
Tel: (65) 6405 5322
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:18 AM5comments Links to this post
Special Blood Donation event honouring 2nd anniversary of Saffron Revolution, Singapore, 27 Sep 09 (Sunday)
You are proudly invited to join in the special blood donation event honouring the second anniversary of Burma ’s Saffron Revolution.
The purpose is to makeapoint that we, Burmese in Singapore , remember, value and salute the effort and sacrifices of thousands of courageous monks, nuns and civilians foranoble aim of peaceful change and national reconciliation in Burma .
Together, we shall pay tribute to this venerable sangha movement, which is unprecedented in the history of Burma and Sasana as well, by donating our blood
The program details are as follow:
Date & Time: 27 September 2009, Sunday, 9:30 AM ~ 11:30 AM
Venue: Blood Bank , Singapore General Hospital (SGH), near Outram Park MRT
Transportation: Chartered Buses at Peninsular Plaza, 9:00 AM
Please contact in advance to:
(1) Ko Soe Tun (HP: 9487 4413)
(2) Ko Thiha (HP: 8157 2117)
(3) Ko Kyaw Htin Aung (HP: 9180 2933)
We, the people of Burma, shall always admire how our monks stand up --- with courage, dignity & sanctity --- for us, for peace, justice & freedom in this month of September, two years ago.
Wunna (on the behalf of the organizers)
Contact: 9227 6490
Photo Credit ; http://i143.photobucket.com/albums/r147/Nitajk/november%2007/redcross.jpg
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:48 PM7comments Links to this post
Labels: Invitation, Overseas Burmese Patriots
ဇူလိုင်မနက်ခင်း၏ … မိုးစက်များကြားမှ အလွမ်းသံစဉ်
ဖုန်းလေးထဲမှ နာရီနှိုးစက်သံသီချင်းလေး ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ မနက်(၆)နာရီတိတိ။ ညက ချစ်သူ အလုပ်တွေမပြီးမချင်း မအိပ်နိုင်ချိန် .. ကိုယ်လည်း စာဖတ်လို့ ထိုင်စောင့်နေခဲ့တာကြောင့် မျက်လုံးတွေက ခပ်ကျိန်းကျိန်း။ ပုခုံးပေါ် လက်ကလေးလာတင်တဲ့ ချစ်သူကို ကျီစယ်ရင်း အိပ်ယာထသွားချိန်မှာ မနက်စာအတွက် ကိုယ်သွားပြင်ဆင် ၊ ချစ်သူရုံးသွားဖို့ အ၀တ်တစ်စုံကို မီးပူတိုက်ပေးလိုက်တယ်။ သွားခါနီးမှ ကိုယ်က မီးပူတိုက်တာ ပိုသဘောကျတာကြောင့် ကြိုတင်မီးပူတိုက်လေ့ မရှိဘူး။ ခေါက်ရိုးမပြန့်မှာ ၊ အနည်းငယ်ကြေမွသွားမှာ စိုးရိမ်တာ ကိုယ့်အကျင့်တစ်ခု။
ဒီရက်ပိုင်းတွေ မဖြစ်မနေ ချစ်သူ ရုံးသွားရမှာမို့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကြိုလွမ်းနေမိသေးတယ်။ တမိုးအောက်မှာ နှစ်ယောက်အတူရှိရင်း တစ်ယောက်က အလုပ်တွေလုပ် ၊ တစ်ယောက်က ကျောင်းစာနှင့် အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ခွဲခွာရသော အချို့ရုံးသွားရမယ့်ရက်တွေ ၊ အစည်းအဝေးရှိသောရက်တွေ ၊ စင်မနာတက်ရသောရက်တွေ ၊ ကိုယ်ကျောင်းသွားရသော အချိန်ပိုင်းလေးတွေကလွဲရင် မခွဲမခွာ ကိုယ်တို့ အတူတည်ရှိခဲ့တာ ကိုယ်ဟာ ဖျောက်မရတဲ့ အကျင့်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ မြင်လွှာအောက်မှာ မြင်နေရမှ ပျော်ရွှင်တတ်သော ကိုယ့်အကျင့်ကြောင့် ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို အမြဲအလိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေတစ်ရက် ကိုယ့်အတွက် မိသားစုအချိန်အဖြစ် သီးသန့်ပေးရင်း .. အလုပ်ကိစ္စအတွက် ခရီးထွက်ရရင်လည်း ဘေးနားမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ကို အပြုံးမပျက် ဂရုတစိုက်ခေါ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ကိုယ်ဟာ အချိန်ပိုင်းကျောင်းတက်ဖို့ပဲ ဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့တယ်။
မနက်ခင်း မိုးသောက်နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ “အိမ်ထောင်ရေး”ဆိုတာကို ကိုယ် အတွေးပြန့်ပွားနေမိတယ်။ ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ မမောမပန်းပြင်ဆင်ခဲ့ရင်း ကိုယ်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ၊ ဟန်းနီးမွန်းခရီးအားလုံးပြီးသွားချိန်မှ ကိုယ်တို့ရဲ့ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရီးသစ်”တစ်ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ရတယ်။ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ မင်္ဂလာဦးနေ့ရက်များမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်ဖက် ၊ ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ နားလည်မှုကတစ်ဖက် .. အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ကိုယ် စိတ်အနည်းငယ်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ နှစ်တွေချီ .. နားလည်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက် .. အတူနေရမှ ပိုနားလည်ပေးရတဲ့ သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေက ဒုနဲ့ဒေးဖြစ်ခဲ့တာမို့ ကိုယ့်အတွက် ပိုမိုရင့်ကျက်ပေးရတဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံလည်း မွေးဖွားလာခဲ့ပါရဲ့။ တစ်ယောက် နေပုံထိုင်ပုံလေးတွေကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနားလည်ခဲ့ကြရင်း ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုက ကိုယ်တို့က စိတ်ထဲမှာ ဒွိဟတွေ ထားခြင်းမရှိတာပဲ။
ကိုယ့်မှာ ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တဲ့ ၊ အစွဲအလမ်းကြီးမားတဲ့ “နှလုံးသားတစ်စုံ”နဲ့ သင်ယူလေ့လာဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ “ဆုံးဖြတ်ချက်”တစ်ခုပေါင်းပြီး လက်ထပ်ခဲ့ချိန်မှာ ပထမဆုံး ကိုယ်အခက်အခဲဖြစ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာက “ချက်ပြုတ်ခြင်းအတတ်ပညာ”။ လက်မထပ်ခင် ကိုယ်အနည်းငယ် ကြိုတင်လေ့လာထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ကိုယ်အတော်လေးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးကြောသန့်စင် ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းလောက်ကိုပဲ ၀ါသနာပါတဲ့ ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူရဲ့ တောင်းဆိုမှုအောက်မှာ ချက်ပြုတ်ခြင်းစိတ်မပါတဲ့ ကိုယ့်အကျင့်က ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရဲ့။ နေ့နေ့ညည ကိုယ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရင်း (၁)လကြာတဲ့အချိန်မှာ သာမန်အရသာလောက် ကိုယ်နိုင်နင်းခဲ့တယ်။ “အလေ့အကျင့်”က လူကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ရင်း စာရေးဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေက “မီးဖိုချောင်”ကိုလည်း စာအုပ်တွေလို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အားပေးရင်း ၊ ကိုယ်ချက်သမျှ ကျေကျေနပ်နပ်စားရင်း .. ပိုကောင်းမွန်ဖို့ အမြဲအကြံပေးတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ကိုယ်လုံးဝမအားသောရက်များ ၊ နေမကောင်းသောရက်များကလွဲ … နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ကြိုးစားသမျှ ကိုယ်တိုင်ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကိုယ့်ကို “အိမ်ရှင်မကြီး”လို့ နောက်ပြောင်ကြပေမယ့် ကိုယ်ဟာ အရင်လို စိတ်မဆိုးဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ်ပေးရတဲ့ ကြိုးစားမှုအချိန်တွေအားလုံးရဲ့ ရလဒ်အဖြစ် ကိုယ်ဟာ အရင်းနှီးဆုံးသော နှလုံးသားတစ်စုံကို အပြည့်အ၀ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီလေ။ ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀မှာ ဖခင်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာရခြင်းတွေက “ဖခင်မေတ္တာ”ကို အနီးကပ်လိုအပ်သလောက် မရခဲ့တာကြောင့် ချစ်သူဟာ ကိုယ့်အတွက် “ဖခင်မေတ္တာ”ကိုလည်း သယ်ဆောင်လာပေးခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မြန်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့် ၊ စိတ်ကြီးတဲ့ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို တော်တော်များများ သေချာနားလည်ပေးရင်း ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးသားကို အမြဲနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို စိတ်ဒေါသကြားက ပြန်သနားမိရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုမိုထိန်းချုပ်သင်ကြားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကိုယ်လိုချင်သောအရာမှန်သမျှကို ချက်ချင်းမပေးနိုင်ရင်တောင် .. မဝေးသောအချိန်တစ်ခုမှာ ပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးမှုတွေကို မိဘတွေကလည်း ချစ်သူဘက်မှ ဆုံးမပေးခဲ့တယ်။ ချစ်သူရဲ့ စရိုက်သဘာဝဟာ ကိုယ့်ထက်အများကြီး စိတ်ပိုကြီးပြီး ၊ သိပ် independent ဖြစ်လွန်းပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် စိတ်အားလုံးလျှော့ပေးခဲ့တာ ကိုယ်တိုက်ရိုက် မပြောပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ကျေနပ်စွာ အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးတွေမှာ အသေးစိပ် လက်တွေ့ကျကျ ၊ ပြတ်ပြတ်သားသား အကောင်းဆုံးလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ စိတ်နှလုံးသားဟာ “အချစ်”နဲ့ပတ်သတ်လာရင် မထင်မှတ်ထားစွာ နူးညံ့မှုကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်တာ ၊ စိတ်နှလုံးသားတခုလုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပါရမီဖြည့်ပေးတတ်တာတွေက ကိုယ်အမြဲအတုယူရပါတယ်။ စကားအပြောအဆိုလေး ကိုယ့်အကြိုက် လှအောင်မပြောတတ်ပေမယ့် စိတ်နှလုံးသားဟာ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပျော့ပျောင်းညင်သာစွာ ဆက်ဆံပုံကိုပဲ ကိုယ့်မှာ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
အသေးစိပ် ခံစားတတ်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးသားဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်လျှော့ရင်း ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုအိမ်လေးအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာ “ချစ်သူ”ကလွဲရင် ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ စာတွေ့ ၊ လက်တွေ့ နှစ်ခုလုံး အရေးကြီးတာကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ အိမ်ထောင်ရေးအားလုံးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို နှစ်နှစ်သက်သက် လေ့လာဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်း ကိုယ်အများကြီး သင်ယူရပါတယ်။ ခိုင်မြဲသော ချစ်ခြင်းတွေ အခြေခံအဖြစ် တည်မြဲစွာ ရှိနေပေမယ့် “မယိုင်နဲ့သော .. မပြိုကွဲသော အိမ်ကလေး”အမြဲတမ်း အသက်ဝင်နေဖို့အတွက် အရေးကြီးသော အချက်တွေအားလုံးကို ကိုယ်အမြဲသတိပြုနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်နားလည်တဲ့ သီအိုရီတစ်ခုက အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ လက်ထပ်ထားပြီးရင် ထိုအိမ်ထောင်ရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ အချက်အလက် ၊ အနုပညာအားလုံးကို ဖန်တီး .. ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ အခွင့်အရေးတွေအားလုံးက မိန်းမလက်ထဲမှာ အများဆုံးတည်ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ်တို့ကြားမှာ ကိုယ်ထင်ထားတဲ့ “မာန”တွေ မရှိခဲ့တာ အံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အကျင့်စရိုက် ၊ အကြိုက်အားလုံးကို လေ့လာပြီး ကြိုးစားဖြည့်ဆည့်ပေးတဲ့ ချစ်သူကို တခါတလေ ကိုယ်စိတ်အလိုမကျရင် အနည်းငယ်ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြောမိတာလည်း မချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပေးလွန်းရင် .. ထုံသွားမှာ ၊ ရိုးသွားမှာစိုးလို့ ရံဖန်ရံခါ ခပ်အေးအေးနေရင်း ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာလည်း မချစ်တော့လို့ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။
ချစ်သူနဲ့ပတ်သတ်ရင် ကိုယ့်အပေါ် ပါရမီဖြည့် ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုအရာအားလုံး စိတ်ကျေနပ်ပေမယ့် “စေတနာ”တစ်ခုကိုပဲ ကိုယ် မခံနိုင်သေးတာပါ။ ကိုယ့်ကိုဖြစ်ထွန်းစေချင်စိတ်တွေများတဲ့ ချစ်သူစေတနာတွေကို ကိုယ်ဟာ အမြဲခပ်လန့်လန့်နဲ့ “အဲဒီလောက် မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် ကိုကို။ မီးမီးကို အများကြီးမျှော်လင့် မလုပ်ခိုင်းနဲ့”လို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရတယ်။ ကိုယ့်ကို အသိဥာဏ်ပညာတွေ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေချင် ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်အောင်မြင်စေချင် ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေ ပိုမိုရင့်ကျက်စေချင် ၊ သူ့အပေါ်မှာလည်း ရင့်ကျက်မှုနှလုံးသားနှင့် သာယာပျော်ရွှင်ချစ်စဖွယ်ကောင်းတာတွေ ရှိစေချင် ၊ အချစ်နှင့် ပြုစုပျိုးထောင်သော ပါရမီဖြည့်ဖက် အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေချင် ၊ အနာဂတ်မှာရှိလာမယ့် သားသမီးတွေအပေါ်လည်း အချိန်ပေး ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မည့် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင် အစရှိတာတွေနဲ့ “ဖြစ်စေချင်သော စေတနာ”တွေများလွန်းလို့ ကိုယ်လည်း မျက်ခုံးတွေ တော်တော်လှုပ်မိတယ်။
“အချစ်”ဆိုတာ ပြုစုပျိုးထောင်ရှင်သန်ရတာကြောင့် ချစ်ခြင်းအဆင့်လေးတွေလည်း လူသားတွေကြားမှာ ကွဲပြားနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့စတင်ခင်မင်သိကျွမ်းကတည်းက “ကိုယ်နဲ့တူသော သမီးလေးတစ်ယောက် လိုချင်မိတယ်”လို့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံကတည်းက ခပ်တင်းတင်းပုံစံကိုယ့်မှာ ခြေလှမ်းတွေတောင် မှားကုန်ခဲ့ရင်း ရင်ခုန်သံလေးတစ်ခု စတင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။ ဒီရင်ခုန်သံတွေ မပျောက်ဆုံးဖို့ … နှစ်တွေကြာလာရင် .. သံယောဇဉ်ကလွဲ ချစ်ခြင်းတွေ အေးခဲလို့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် အလုပ်တွေရှုပ် ၊ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ စုံတွဲစာရင်းထဲ ကိုယ်မပါဝင်ချင်တာကြောင့် လိုအပ်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ .. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုစုပျိုးထောင်မှု ၊ ကြိုးစားမှုတွေကို ကိုယ်အသက်ရှင်နေသရွေ့ စိုက်ပျိုးသွားမှာပါ။
အတွေးလေးတွေကြားမှာ မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေလည်း ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာ ညိုမှောင်ပြီး ရွာသွန်းလာပါရဲ့။ မိုးစက်တွေဟာ အလွမ်းတွေကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုရင် … ဒီရက်ပိုင်းလေး မိုးမရွာပါနဲ့လားကွယ်။ ကိုယ့်အလွမ်းတွေကို ဖတ်မိသူတွေ မျက်လုံးနောက်ချင်နောက်နိုင်ပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့်လည်း … ရေမြေတွေခြား ခွဲနေသူတွေမှ လွမ်းခွင့်ရှိတာလားကွယ်။ ခေတ္တခဏလေး ခွဲခွာသူတွေလည်း လွမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ကိုယ်ယုံကြည်တာကြောင့် …….. မြစ်နှစ်ခု၏ပေါင်းဆုံရာ သီချင်းလေးကို ခပ်တိုးတိုးညည်းဆိုရင်း ရောင်နီလာသော မနက်ခင်းမှာ အလွမ်းတွေက မိုးစက်တွေကြား ပြန့်ကျဲလျက် .. ။
မှတ်ချက်။ ဓာတ်ပုံများအား google မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:06 AM 23 comments Links to this post
Labels: Lin Let Kyal Sin, True Feelings
Burma VJ - Screening in Singapore
Date: Thursday, 16 July 2009
Location: Jubilee Hall, Raffles Hotel
Screening starts at 7.30pm promptly.
Admission Free. Seating begins from 6.45pm First-come-first served basis.
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:55 AM2comments Links to this post
Labels: Invitation, Myanmar, Videos
Goodbye .. King of Pop
အနုပညာအရည်အသွေးများ တောက်ပြောင်နေခဲ့သော ကြယ်တစ်ပွင့် ကမ္ဘာမြေပေါ်က အပြီးပိုင် ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရပြီ။ ထွက်ခွာသွားခဲ့သော သတင်းတွေ စတင်ထုတ်လွှင့်ကတည်းက ရင်ထဲမှာ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိတာ အကြိမ်ကြိမ်။ ပြည်သူချစ်သော သူရဲကောင်းတွေ ၊ အနုပညာရှင်တွေ ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ကြွေလွင့်သွားတိုင် ရင်ထဲဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားမှုများက ဆိုးရွားနာကျင်လှသည်။ သူသီဆိုခဲ့သော ၊ သူ့နှလုံးသား အနုပညာအရည်အသွေးများကို နေ့စဉ် အချိန်တိုင်းလိုလို ထုတ်လွှင့်ပြသနေသော Channels တွေကို ထိုင်ကြည့်ဖြစ်ရင်း နှမြောတသသ ပိုမိုဖြစ်နေမိသည်။ “ထွက်ခွာသွားခြင်း”ဟာ သူ့အတွက် အေးချမ်းခြင်းသာ ဖြစ်စေတယ်လို့ လူအများစု ယုံကြည်ဖြေသိမ့်ကြပေမယ့် ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော စိတ်နှလုံးသားအေးချမ်းမှုများဖြင့်သာ သဘာဝကြီး၏ မလွန်ဆန်နိုင်မှုအဖြစ် ကျွန်မစိတ်ထဲ ဖြစ်စေချင်မိသည်။
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး သူ့အရည်အသွေး ၊ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြသည်။ အစားထိုးမရနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကြီးက ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ထွန်းနေသည်။ သူ့ စွမ်းအင် ၊ ခွန်အားများဖြင့် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားထားသော အနုပညာများကို နားဆင်ကြည့်ရှုရင်း ရင်ထဲမှ လှိုက်လှဲစွာ ဆုတောင်းပေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခမ်းနားစည်ကားလှသော သူ၏ နောက်ဆုံးခရီးကို နှုတ်ဆက်ခြင်းများဖြင့် ကြည့်ရှုဖြစ်ရင်း ခံစားထိခိုက်ဖွယ်ကောင်းလှသော သမီးလေး၏စကားလုံးများကို ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။
“နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် အလင်းလက် အတောက်ပဆုံး အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့် King of Pop, Michael Jackson … ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀မှာ မင်းရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာအရည်သွေးတွေနဲ့အတူ သီဆိုကခုန်ရင်း အေးချမ်းစွာနားခိုနိုင်ပါစေ … ”
ကိုယ်တို့အားလုံးဟာ တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘ၀လေးကို ခဏတာရရှိချိန် … ကိုယ်ချစ်ခင်သူများအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးပေး ၊ အတူပျော်ရွှင်ကြရင်း “နောင်တ”ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကြီး ကျန်ရစ်မနေခဲ့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ ဒီမိခင်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ ၊ ကိုယ်ကချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက် “စိတ်ချမ်းသာမှု”လက်ဆောင်လေး မပျက်မကွက် ဖြည့်ဆည်းပေးကြဖို့ မမေ့ရင်း ဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်ကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းကြရအောင်လားကွယ် … ။
ကမ္ဘာမြေလူသားများရင်ထဲ အစဉ်အမြဲ စွဲထင်ကျန်ရစ်နေမည့် သီချင်းကောင်းများ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:11 PM 1 comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:28 AM6comments Links to this post
Labels: DawAungSanSuKyi, Events
လွတ်လပ်တရားမျှတမှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး စုပေါင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ (တိုပါးရိုး မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ စင်္ကာပူ)
It is time to show our support and affection to our beloved leader, Daw Suu, wishing her freedom, justice & peace of mind. You are cordially invited to join the praying session for Daw Suu, our people & our country.
Time : 6:00 PM, 24 May 2009, Sunday
Venue: Toa Payoh Burmese Buddhist Temple (3rd Floor)
Please disseminate this info to show your support. Let's make very clear that we, the people, are with Daw Suu.
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:02 PM0comments Links to this post
Labels: DawAungSanSuKyi, Invitation
Lessons in Democracy ( Burmese Translation )
Lessons in Democracy ( Burmese Translation ) linletkyalsin
Publish at Scribd or explore others: Magazines & Newspape democracy lessons
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:12 AM3comments Links to this post
ရွှေတိဂုံအသင်းတော် (စင်္ကာပူ) ဓာတ်တော်တိုက်၏ မွန်မြတ်သော နှစ်သစ်မင်္ဂလာ မေတ္တာသင်္ကြန်ရေပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:09 AM5comments Links to this post
Labels: Festivals, Invitation
(၂၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ (၂၀-...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်...
Special Blood Donation event honouring 2nd anniver...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး စုပေါင်းဝတ်ပြုဆုေ...
လွတ်လပ်တရားမျှတမှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြော...
ရွှေတိဂုံအသင်းတော် (စင်္ကာပူ) ဓာတ်တော်တိုက်၏ မွန်မြတ်...